Dhageyso :-Rag Dilal Geystay Oo Gacanta Lagu Dhigay - Awdinle Online
Dhageyso :-Rag Dilal Geystay Oo Gacanta Lagu Dhigay
December 2, 2019 (Awdinle Online) –Saacadihii la soo dhaafay waxaa ay howlgallo kala duwan ay sameeyen Ciidamada Ammaanka Dowlad goboleedka Jubbaland howlhalada ayaa laga sameeyay xaafado ka tirsan Magaalada Kismaayo ee Gobolka Jubbada Hoose,halkaas oo dad ay Nabadoono ku jireen lagu dilay.
Howlgalka ayaa saraakiisha Ciidamada waxaa ay sheegeen in uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayey ,isla markaana lagu soo qabtay hub iyo dad falal amni darro ka geystay Gudaha Magaalada Kismaayo.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland, Cabdinuur Ibraahim Xuseen oo Warbaahinta kula hadlay Kismaayo ayaa shegay in howlgalka uu ahaa mid lagu soo afjarayay Kooxo dhibaatooyin amni darro ka geystay Kismaayo.
Warkaan kasoo yeeray Wasaaradda Amniga Jubbaland ee ku aadan in Ciidamada Ammaanka ay gacanta ku dhigeen Rag hubeysan oo ka tirsanaa Shabaab dilalna ka geysan jiray kismaayo weli kama hadlin dhankooda Al-Shabaab.
Previous articleWasaaradda Arrimaha Gudaha DF bedashay odayaashii saxda ahaa ee soo xulista baarlamanka Galmudug
Next articleGuddoomiyaal cusub oo loo magacaabay Degmooyinka Shangaani iyo Waaberi